Nanavotra olona an’arivony ny fiomanana rehefa namely ny morontsiraka atsinanan’i India ny rivodoza Fani · Global Voices teny Malagasy
Olona roa tapitrisa mahery no nafindra toerana tany India sy Bangladesh
Voadika ny 09 Mey 2019 5:17 GMT
Sarintany mampiseho ny làlana sy ny hamafin'ny Rivodoza Fani izay nandrava an'i India sy i Bangladesh. Sary avy amin'ny Wikipedia. Azon'ny rehetra ampiasaina.
Raha niditra an-tanety tao amin'ny fanjakana Indiana tao Odisha ny rivodoza mahery vaika Fani tamin'ny 3 May, dia namoizana ain'olona miisa 24 izany talohan'ny niparitahany tany amin'ny faritra mpifanolo-bodirindrina tany Bengali Andrefana ary avy eo tany Bangladesh. I Bangladesh no nanome ny anarana hoe Fani izay midika hoe ny hazon'ny bibilava amin'ny teny Bengali sy amin'ny fiteny Aziatika Atsimo hafa. Io no rivodoza mahery vaika indrindra faharoa tao anatin'ny 20 taona taorian'ny rivodoza Odisha tamin'ny taona 1999 (fantatra ihany koa amin'ny hoe Rivodoza Goavana 99 ).
Nahafatesan'olona miisa 10.000 i Odisha, saingy maro no voavonjy noho ny faharetan'ny fitondram-panjakana tao an-toerana sy ny famindran-toerana efa voarindra tamin'ny alàlan'ny fanohanana avy amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo an'arivony. Efa niomana mialoha ihany koa ny fitondram-panjakana tany an-toerana tamin'ny rivodoza Fani raha efa fantatr'izy ireo fa hamely ny tanànakely miisa 10.000 sy ny Kaominina an-drenivohitra miisa 52 (ULBs) any amin'ny Distrika miisa 14 ao Odisha i Fani.
Hoy ny tatitry ny The New York Times :
Nampiasa ny zava-drehetra teo am-pelantanany izy ireo nampitandremana ny olona ny zava-nitranga : hafatra miisa 2,6 tapitrisa, mpilatsaka an-tsitrapo miisa 43.000, mpamonjy voina efa ho 1.000, dokambarotra amin'ny fahitalavitra, fanairana amoron-dranomasina, fiarabe mpitatitra, polisy, ary rafitra fanairana ho an'ny daholobe mandefa andian-kafatra, amin'ny fiteny ao an-toerana, amin'ny teny mazava: ‘Tonga ny rivodoza. Mankanesa any amin'ny toeram-pialofana.’
Nisioka ny manampahefana lehiben'ny minisitra ao Odisha mba hangataka fanohanana ara-bola avy amin'ny Tahirim-bolam-panampian'ny Lehiben'ny Minisitra hitantanana ny ezaka fanarenana taorian'ny fahavoazana mba ahafahan'ny rehetra tra-pahavoazana mampandre ny manampahefana amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tenirohy #RivodozaFaniSOS, misioka amin'ny @SRC_Odisha na miantso ny laharan'ny hamehana amin'ny +91. -0674-2534177.
Ravan'ny rivodoza Fani i Odisha. Miangavy anao hanampy amin'ny fanarenana ny fiainana sarobidy amin'ny fandraisanao anjara an-tserasera ao amin'ny Tahirim-bolam-panampian'ny Lehiben'ny Minisitra amin'ny alàlan'ny rohy: https://t.co/C2LrUttIsr pic.twitter.com/gtEb9viHk2
Nampahafantatra ny kaonty Twitter ofisialin'i N. Chandrababu Naidu, Lehiben'ny Minisitra ao Andhra Pradesh :
Manara-maso akaiky ny fahasimban'ny fambolena ataon'ny #RivodozaFani izahay. Afaka mitatitra ny fahasimbana sy ny fatiantoka amin'ny iray amin'ireto manaraka ireto ny tantsaha :
1. Ny fampiasa Ny vahoaka aloha https://t.co/qYQO66W8PO
2.Kaizala AP CM https://t.co/3ZQ4C3RCwa
3. tranonkala RTG https://t.co/zxLPRwxPLm pic.twitter.com/yyReR73luZ
Natanjaka toy ny rivodoza amin'ny sokajy faha 4 miaraka amin'ny sokajy faha 5 izay ambony indrindra voarakitra amin'ny maridrefy Saffir-Simpson ity rivodoza ity izay nanana hafainganam-pandehan'ny rivotra eo anelanelan'ny 209 ka hatramin'ny 251 kilometatra isan'ora. Tamin'ny fotoana nitaterana ny vaovao ny 3 May, nahetsika ireo manampahefana miisa 56.000 tany India mba hanampy amin'ny famindran-toerana ny olona maherin'ny 1 tapitrisa ho any amin'ny toeram-pialofana efa voafaritra.
Olona miisa 24 hatreto no maty tao Odisha noho ny rivodoza Fani.
Nampiray hina ny rehetra tao Odisha i Fani – niasa niaraka tamin'ny biraon'ny fampitam-baovao ny tompon'andraikitra ao an-toerana mba hampielezana ny hafatra fanairana ho an'ny vahoaka. Nisioka ny fangatahana ho an'ny fantsom-pampitam-baovao mba hampitana ny hafatry ny governemanta i Vineel Krishna, tale jeneralin'ny Bhubaneswar Smart City, sampan-draharaha iray ao an-drenivohitr'i Odisha:
Milamina ny faritra misy ny masony (afovoany) aorian'ny rivotra maherin'ny dingana voalohany. Mamitaka ny olona izany ka lasa mivoaka eny an'arabe ny olona. Mifofofofo amin'ny haingam-pandeha mahery kokoa ny rivotra sy ny oram-batravatra raha vao lasa ny masony, tena mampidi-doza. Mandalo izany dingana izany ao Bhubaneswar amin'izao fotoana izao! Rivomahery adiny 4 hatramin'izao!
Nankasitraka ny Politikan'ny Zero Niharam-boina avy amin'ny Departemanta Meteorolojika Indiana (IMD), sampan-draharahan'ny governemanta federaly izay manamaivana ny voka-dratsy ateraky ny fitantanana ny fahavoazana amin'ny loza voajanahary ny Biraon'ny Firenena Mikambana ho an'ny Fampihenana ny Fahavoazan'ny Voina (UNDRR):
Nampihena ny fahafatesan'olona tamin'ny rivodoza Fani ny politikan'ny ‘zero niharam-boina’ tany India, sy ny fampitandremana mazava tsara.
Nisioka ny fahasarotan'ny famindrana toerana ny olona hiala ny tranony ho any amin'ny toerana azo antoka i Swetapadma, izay miasa ho an'ny governemantan'i Odisha:
Marina. Niaina izany teo anivon'ny Governemanta. Tena sarotra ny namindra ny olona, ​​tsy maintsy nitalaho sy nampitahotra izahay, naka fanampiana tamin'ny polisy hanaovana ny famindrana toerana. Tao anatin'ny 72 ora mahery ary zara raha natory izahay. Mankasitraka ny polisy sy ireo rehetra niara-niasa taminay.
Niantraika ihany koa tamin'ny fivezivezen'ny vaovao ny voka-dratsy naterak'i Fani satria dia tapaka nandritra ny rivodoza ny tambajotra an-tserasera tao an-toerana :
Tapaka ny Kanak News Teleport
Saika ny tambajotra rehetra no voahelingelina na dia teo aza ny fepetra noraisin'ny sampan-draharahan'ny fifandraisandavitra mialoha mba hiantohana ny fifandraisana mandritra ny rivodoza. Na izany aza, noho ny fidirana voafetra taorian'ny ora maro nisian'ny fahatapahan'ny herinaratra dia maro ireo olona no nampiasa ny tambajotra sosialy mba hizarana vaovao niaraka tamin'ny sary sy lahatsary avy any an-toerana.
Ny 4 Mey tamin'ny 9 ora maraina – Tsy misy rivotra, Masoandro mibaliaka, Famerenana amin'ny laoniny amin'ny dingana feno.
Tsy misy herinaratra
Ny tambajotra finday: mandeha ankehitriny ny Jio Voice, tena miadana ny angondrakitra. Tsy misy famantarana ny Idea. Tsy misy famantarana hatramin'ny omaly ny Airtel . Miasa tsy tapaka ny BSNL .
Nangataka ireo mpirotsaka an-tsitrapo handika ny lahatsoratra Wikipedia amin'ny fiteny Aziatika ny Wikipedia mba hanampiana ny olona hahazo vaovao amin'ny fitenin'ny indizeny.
Afaka mandray anjara amin'ny fampahafantaranay momba ilay rivodoza na ny vokatr'izany ve ianao? Afaka mampiasa ny fanampianareo amin'ny fiteny rehetra izahay. Miangavy anao mba handika teny sy/na hizara. #RivodozaFani
Tsy azo vinaniana ny fahavoazana teo amin'ny maha-olombelona, ​​ny fahavoazana ara-toekarena ary ara-tontolo iainana taorian'ny voka-dratsy mahatsiravina naterak'i Fani tany India sy Bangladesh . Raha ao anatin'ny fifidianana ankapobeny izay handaniana vola mitentina ₹ 50.000 crore (7 miliara $ ) i India dia efa fahavoazana lehibe ny voina naterak'i Fani ary efa niatrika zava-tsarotra ny olom-pirenena .